မယ့်ကိုး: အပျိုကြီးဟု သရော်လှောင်ပြောင်ရာဝယ်
အပျိုကြီး ၊လူပျိုကြီးလို့ သရော်လှောင်ပြောင်တဲ့သူတွေမှာ အနိုင်ကျင့်လိုစိတ်အပြင် ၊ သိမ်ငယ်စိတ်၊ အားကျမနာလိုစိတ်ရှိလိမ့်မှာ။ ရှက်ဖွယ်။ သူတို့ဘာကို ဖုံးကွယ်ပြီး ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားနေလဲ။စိတ်ပညာ၊ လူမှုဗေဒ၊ အတွေးအခေါ်၊ ဒဿနတွေနဲ့ယှဉ်ပြောစတမ်းဆို ခြောက်ပြစ်ကင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလို့ မရှိပါဘဲ။ …………………………………………………………………………………………………………
မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပြန်ဆုံတိုင်း တစ်ယောက်တည်းပဲလား။ အပျိုကြီးလုပ်နေတော့မှာလားလို့ စကားကြားရဖန်များလာပေမယ့် သည်းခံနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးများမှာ သူတို့ယောက်ျားက အဘယ်မျှကောင်းကြောင်း၊သူတို့အပေါ် အဘယ်သို့ကြင်နာကြောင်း၊ သူတို့အိမ်ထောင်ရေးမှာ တုနှိုင်းမမှီ သာယာကြောင်း အပြိုင်အဆိုင်ကြွားဝါကြသောအခါကျမှ ရယ်ချင်လာတော့တာ။ဤသို့ဖြင့် ထိုစာပိုဒ်ကို မျက်နှာစာအုပ်မှာ ရွဲ့တဲ့တဲ့ အလွန်အကျူးရေးမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မရယ်နိုင်သူအချို့တော့ မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးပြုကြပါတယ်။ ထိုမျက်နှာစာအုပ်စကားဝိုင်းမှ တစ်ချို့စကားလုံးများကို ကူးယူဖော်ပြချင်ပါတယ်။(ပထမအမျိုးသမီး၊ ဒုတိယအမျိုးသမီးဟု အမည်ပေးရခြင်းမှာ ပထမမှတ်ချက်ပေးသော အမျိုးသမီးဟု ဆိုလိုပြီး၊ ဒုတိယ၊တတိယ၊စတုတ္ထဟု ဆိုရာတွင်လည်း ထိုသို့ပင် မှတ်ယူစေချင်ပါတယ်။)
ပထမအမျိုးသမီး-သရော်လှောင်ပြောင်တယ်လို့ ယူဆရင်တော့လဲ ကိုယ်ယူဆတဲ့ အတိုင်းပေါ့။ ဒါဟာ ဖက်တီး၊ ဂျပု စတာတွေနဲ့ သိပ်မတူပါဘူး။
August 11 at 2:59pm via mobile · Like
Mae Coe-ဟုတ်ကဲ့ ဘာလို့ မတူတာလဲလို့ ရှင်းပြပေးပါလား အစ်မ …...... ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ဒါဆို အိမ်ထောင်ကျသူတွေကို ဘာလို့ အအိုကြီးလို့ မခေါ်တာပါလဲ။ ကျွန်မ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အများနဲ့မတူကွဲပြားနေသူတွေကို ခွဲခြားနှိမ့်ချလိုခြင်းလို့ ထပ်မံဆိုချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ရင်းနှီးလို့ခေါ်တယ်ဆိုဆို ဒါဟာ ရယ်စရာဆိုရင် ခါးအောက်ပိုင်းပြက်လုံးလိုပဲ နိမ့်ကျတဲ့ဟာသတစ်ခုလို့ပဲ မှတ်ယူပါတယ်။
August 11 at 3:04pm · Like · 9
ပထမအမျိုးသမီး-အမ အိမ်ထောင်ကျတော့ ၃၁နှစ်ကျော်ပြီ။ ၂၅ကျော်ရင် အပျိုကြီး အခေါ်ခံရတဲ့ ခေတ်မှာ တစ်ခါမှအခေါ်မခံခဲ့ရတော့ ဒီfeelingကို နားမလည်ဘူးဆိုပါတော့။ အဲ တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ ကိုယ်ကလည်း သူများကို တစ်ခါမှမခေါ်ဖူးဘူး။
August 11 at 3:18pm via mobile · Unlike · 1
ပထမအမျိုးသမီး-အစ်မ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာလဲ ခုထိ (၃၆၊၃၇) အိမ်ထောင်မပြုသေးသူတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ ကြည့်ရတာ အပျိုကြီးအခေါ်ခံရလို့ ဘာမှfeeling ဖြစ်ပုံမရပါဘူး။ ခေါ်တဲ့သူတွေကရော သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကပါ အိမ်ထောင်မပြုချင်လို့ မပြု တာ ဆိုတာသိနေတာကိုး။ ဒါကြောင့် ဘာမှသိပ်မခံစားတာလားမသိပါဘူး။
August 11 at 3:44pm via mobile · Like · 1
Mae Coe-ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ……… ညီမကိုလည်း အပျိုကြီးလို့ လာခေါ်ရင် ဝမ်းမနည်း၊ဒေါသမထွက်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်လည်း (ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့ဘဝကို) ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ခေါ်တဲ့သူတွေကိုသာ အခြေခံယဉ်ကျေးမှုမရှိ စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်းမမြင့်သူတွေလို့သာ စိတ်ထဲက မှတ်ယူတာပါ။
August 11 at 3:55pm · Edited · Like · 7
Mae Coe-အစ်မ……. ပြီးတော့ ညီမရဲ့ status မှာ အပျိုကြီး ၊လူပျိုကြီးလို့ သရော်လှောင်ပြောင်တဲ့သူတွေလို့ ရေးထားပါတယ်။ ခေါ်ဝေါ်ခြင်း၊ နောက်ပြောင်ခြင်း၊ သရော်လှောင်ပြောင်ခြင်းက အဆင့်ကွာတာမို့ တကယ်လို့ သရော်လှောင်ပြောင်ခံရမယ်ဆိုရင် အစ်မရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ (အနည်းအများ) ထိခိုက်ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ ညီမယုံကြည်ပါတယ်။
August 11 at 4:31pm · Edited · Like · 2
ဒုတိယအမျိုးသမီး-လူတစ်ချို့က နှိမ့်ချချင်တဲ့သဘောနဲ့ ပြောကြတယ်။လူတစ်ချို့ကျ ဒီလိုပဲ ဘာမှမရည်ရွယ်ဘဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆိုင်တယ်။ တ ချို့က ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ကို ပြောတာ ။ မကြားချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်တယ်။ ဘာ response မှ မပေးဘူး။ ခပ်တည်တည် နေပေးလိုက်တယ် ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ တော်တော်ရိုင်းတယ်။look down ဖြစ်တယ်။ August 11 at 5:22pm via mobile · Unlike · 4
တတိယအမျိုးသမီး-မဂျူကတော......အေးဟေ့ နင်တို့လိုဘ၀ပေးမကောင်းတော့ ချစ်တဲ့သူကော မချစ်တဲ့သူကော စိတ်ပါပါမပါပါ ပေါင်းစရာမလိုဘူးပေါ့ဟယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်.......သူလဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်လဲစိတ်ချမ်းသာ.......တစ်ချို့ကဘာရယ်မဟုတ် သူများကိုအဲလိုလေး ပြောလိုက်ရမှ နေတတ်တာဆိုတော့ ပြိုင်ပြီးပြောမနေဘူး......ဒီအသက်အရွယ်ထိ အခေါ်ခံရပေါင်းအကြိမ်များစွာ.......နားရည်ဝသွားလို့ဖြစ်မယ်။ ထူးပြီးမခံစားရတော့ဘူး.... မယ်လဲ နောက်ဆို နေတတ်သွားပါလိမ့်မယ်..... တစိမ်းတွေအလယ်မှာပိုဆိုးသေး......သူတို့က အပျိုကြီးဖြစ်နေတာတစ်ခုခု ချို့ယွင်းနေလို့လားတဲ့။ အင်း၊ ဟုတ်တယ် ငါ့မှာသူများကို ငါ့ထက်ပိုပြီး ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ပါမလာခဲ့ဘူးလို့....... နောက်မမေးတော့ဘူး။
August 11 at 5:40pm · Unlike · 9
စတုတ္တအမျိုးသမီး-တခါမှ အခေါ်မခံရဖူးသူက ခေါ်ခံရတဲ့လူတွေရဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်လို့ ပြောဆိုတာကြီးက တော်တော် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိဘဲ လာရေးတာလို့ပဲ မြင်မိတယ်။ ညီမလဲ အပျိုကြီး လူပျိုကြီးဆို စနောက်စရာလို့ ထင်နေတတ်တဲ့ လူတွေကို ငယ်ငယ်ထဲက လုံးဝကြည့်မရဘူး။ အတွေးအခေါ်တိမ်တဲ့လူတွေလို့ သတ်မှတ်တယ်။ လုံးဝအထင်မကြီးဘူး။ တခါတလေ ကိုယ့်ဘာသာ ယောက်ျားမယူချင်တာတောင်မှ "ရတာမလို မလိုတာ မရမလို့လေ"လို့ ကွယ်ရာတမျိုး ရှေ့တင်တမျိုး ပြောဆိုကြသေးတာ။ နောက်ရှိသေးတယ် ယောက်ျားရှာပေးမယ်ဆိုတာက တမျိုး၊ သနားကြည့်နဲ့ကြည့်တာက တမျိုး။ ဒီမခံချိမခံသာ ခံစားမှုမျိုးကို ခံလိုက်ရတဲ့လူပဲ သိတယ်။ ကိုယ်က ယောက်ျားမရှားပါဘူး မယူချင်လို့ပါဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကို သိပေမယ့် ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ လူတွေက ယောက်ျားတစ်ယောက်ရတာနဲ့ သူတို့က ကိုယ့်ထက်သာတဲ့ အထာမျိုးလာပြောတာလောက် ခံပြင်းတာမရှိဘူး။ ယောက်ျားယူခြင်း၊ ယောက်ျားမယူခြင်းက ယှဉ်ပြိုင်စရာလဲ မဟုတ်ဘူး၊ သနားစရာလဲ မဟုတ်ဘူး၊ နှိမ့်ချစရာလဲမဟုတ်ဘူး၊ သိမ်ငယ်စရာလဲမဟုတ်ဘူး လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ရွေးချယ်မှု၊ ဘ၀ပေးအခြေအနေပဲ ။ လူလူချင်း လေးစားသင့်တယ်။ ညီမကတော့ လုံးဝ လုံးဝရှုတ်ချပါတယ် ဒီလိုလူတွေကို! August 11 at 9:34pm · Unlike · 6
ထိုရေးသားမှုများအပြီးမှာတော့ မိတ်ဆွေတစ်ချို့က အပျိုကြီးဟုသရော်လှောင်ပြောင်မှုကို ကျွန်မ မနှစ်လိုကြောင်း သိရှိသွားကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်မက နှိမ့်ချသော၊ သရော်ပြောင်လှောင်သော၊ စော်ကားအနိုင်ကျင့်သော မည်သည့်စကားကိုမျှ မနှစ်လိုသူဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးတစ်ဦးက ‘တစ်ခါတလေကျတော့ ရန်ကုန်ဟာ အရွယ်လွန်ကာမှ သိပ်ကိုလှချင်လွန်းလို့ အတင်းကြီးသနပ်ခါးတွေလိမ်းပြီး၊ နှုတ်ခမ်းနီတွေရဲရဲတွေ မလိုက်မဖက်ဆိုးထားတတ်တဲ့ အရုပ်ဆိုးဆိုးအသက်ကြီးကြီးအပျိုကြီး တစ်ယောက်နဲ့တူပြန်ရော…(စ်ိတ်မဆိုးနဲ့နော် အစ်မ) ဣနြေ္ဒမရဘူးလို့ ခံစားမိလို့…။’လို့ ရန်ကုန်အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအောက်မှာ မှတ်ချက်ပေးလာတော့ ဒီအပျိုကြီးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနောက်ကွယ်က အကြောင်းခြင်းရာတွေကို စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖြစ်လာပါတယ်။
အရုပ်ဆိုးဆိုးအသက်ကြီးကြီးမိန်းမတစ်ဦးဟု မသုံးနှုန်းဘဲ အပျိုကြီးလို့ အဘယ်ကြောင့်အတိအကျ ရေးသားထားပါလိမ့်။ ကျွန်မလည်း ထိုသို့ အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်မဖက် လူငယ်တွေလို ပြင်ဆင်ထားသော၊ အမျိုးသမီးကြီးများစွာနှင့် တွေ့ဖူးခဲ့၊ တွေ့ကြုံဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၅၀၊ ၆၀ အရွယ်ဖြစ်ပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်လို ပြင်ဆင်ထားသောအဘွားကြီးများစွာကို အပျိုကြီးလို့ တစ်ခါမှ ခေါင်းစဉ်တပ်မမြင်ခဲ့ဖူးပါ။
အရွယ်လွန်ကာမှ အပျိုကြီးတစ်ဦးတည်းကသာ လှချင်ပြီး ကလက်တက်တက် အလွန်အကျွံ ပြင်ဆင်တတ်တယ်လို့ လူတွေမြင်နေတာလား။ တခြား အရုပ်ဆိုးဆိုး၊ အသက်ကြီးကြီး အိမ်ထောင်သည်၊တစ်ခုလပ်၊မုဆိုးမများကကော အရွယ်လွန်ကာမှ လှချင်လွန်းလို့ အတင်းကြီးသနပ်ခါးတွေလိမ်းပြီး၊ နှုတ်ခမ်းနီတွေရဲရဲတွေ မလိုက်မဖက်မလိမ်းခြယ်တတ်ကြဘူးလား။ ကံအားလျော်စွာပဲ ကျွန်မက (သူမရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ) အတင်းကြီးသနပ်ခါးတွေလိမ်းပြီး၊ နှုတ်ခမ်းနီတွေရဲရဲတွေ မလိုက်မဖက်ဆိုးတတ်သော မိန်းမ မဟုတ်သဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ရပါသေးတယ်။
ကျွန်မရဲ့လက်လှမ်းမှီရာ အနီးစပ်ဆုံးသက်သေကတော့ အပျိုကြီးအဒေါ်နှစ်ယောက်ရှိပြီး သူတို့မှာလည်း အပျိုကြီးမိတ်ဆွေတွေရှိပြီး အားလုံးမှာ ဇရာကိုအံတုပြီး အတင်းကာရောဣနြေ္ဒမရ ဖုံးလွှမ်းနေသူများမဟုတ်ဘဲ သဘာဝနဲ့လိုက်လျောညီထွေစွာ အေးဆေးသက်တောင့်သက်သာနေသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်း အပြောင်အပျက်ကလေးစကားမှအစ လူကြီးရဲ့ သရော်စော်ကားသီချင်းအဆုံး သုံးနှုန်းကြသော ‘အပျိုကြီးတွေ လင်မရလို့ လန်ဒန်မြေပဲယို’ဟူသော စကားကို သတိရမိပါတယ်။
ယောက်ျားလိုချင်လို့ အပျိုကြီးတွေ ရွနေတယ်ဆိုတဲ့ ထိုမျှနှိမ့်ချစော်ကားသော စကားလုံးကို ပြောဆိုရဲသောသူများ၊ အားပေးထောက်ခံသူများကို အံ့သြမိပါတယ်။ သူတို့က တကယ်ပင် ထိုသို့အပျိုကြီးများကို တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ဖူးသလော။ မရှိခိုးနိုး၊ မလှစုန်းယိုး ဆိုသလို အပျိုကြီးများမှာ အိမ်ထောင်ပြုချင်လွန်းသဖြင့် အမြင်မတော်အောင် အလှပြင်၊ မျက်စိနောက်လောက်အောင် ဣနြေ္ဒမရ အငမ်းမရ ပျာလောင်ခတ်နေတယ်လို့ မြင်ကြသလား။ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။
တစ်ချို့ကလည်း အပျိုကြီးဆိုလျှင် ဘုပြောကာ ဂွကျကျနေသူတွေ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သဟဇတမဖြစ်တဲ့လူတွေ။ ရွာပြင်ရောက်နေတဲ့ လူတွေ။ ကလေးမွေးမပေးလို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးမပြုတဲ့သူတွေလို့ စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများလည်း ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆိုးမြင်မှုများကို မဖြေရှင်းလိုပေမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးမပြုဘူးဆိုတာတော့ အတော်ကို လွဲမှားဆိုးရွားတဲ့အချက်ပဲဆိုကာ ကျွန်မကန့်ကွက်ပါရစေ။
၂၀၅၀ မှာ လူဦးရေအလွန်တိုးတက်များပြားလာပြီး အစာရေစာရှားပါး၊ နေထိုင်မှုအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့လာပြီး သဘာဝသယံဇာတက ပံ့ပိုးလို့ မလောက်ငနိုင်တော့ဘူးလို့ ရေးထားတဲ့စာတမ်းကို ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီအဖြစ်သာ တကယ်ကြုံလာမယ်ဆိုရင် အပျိုကြီးတွေက လူဦးရေးနည်းစေခြင်းဖြင့် လောကကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင်အကျိုးပြုနေတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
အထက်ပုံမှာလိုပဲ ကျွန်မလည်း အပျိုကြီးတွေဆိုတာ ဘုပြောကာ ဂွကျကျနေသူတွေ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သဟဇတမဖြစ်တဲ့လူတွေ။ ရွာပြင်ရောက်နေတဲ့ လူတွေမဟုတ်ဘူး။ ကလက်တက်တက် ဣနြေမဲ့နေသူတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ဆွဲပြောချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြစ်ရှာကဲ့ရဲ့ချင်သူတွေကတော့ လိုရာကိုဆွဲ အဆိုးမြင်လက်ညှိုးထိုး အဆင့်အတန်းခွဲနှိမ့်ချနေဦးမယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်မသိပါတယ်။
နှိမ့်ချခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကို လူတွေဘာကြောင့်ပြုလုပ်ကြပါသလဲ။ သူတို့အတွက် တပါးသူကို အနိုင်ကျင့်တာ စွမ်းအင်တစ်မျိုးဖြစ်လို့ အာဏာတစ်မျိုးရလို့ ပြုလုပ်ကြခြင်းရယ်လား။ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာတော့ အနိုင်ကျင့်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ တွန်းအားနှစ်မျိုးရှိတယ်။ တစ်ခုက နာမည်ကြီးချင်စိတ်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခုက လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်လိုစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလေတာ။ နာမည်ကြီးချင်တဲ့ အနိုင်ကျင့်သူက ပတ်ဝန်းကျင်က ပစ်ပယ်ထားတဲ့လူကို ရှာတယ်တဲ့။ မည်သို့ဖြစ်စေ တစ်ဖက်သားကို ချိုးဖဲ့အနိုင်ယူလိုစိတ်ဗီဇသွေးစီးဆင်းနေတဲ့လူတွေဟာ အမဲလိုက်သလို ကိုယ့်ထက်အားနည်းတယ်ထင်သူကို ရှာဖွေကြတဲ့အခါ ထိုသို့နှိမ့်ချတဲ့အမြင်တွေ၊ သရော်စော်ကားမှုတွေ ၊လှောင်ပြောင်အနိုင်ကျင့်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သလား။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရေးထားသော အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို သတိရမိပါတယ်။ သူက ပွင့်လင်းသော၊ဂုဏ်သိက္ခာရှိ ဂေးလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချစ်သူယောက်ျားလေးနှင့် နန်းရှေ့ကျုံးမှာ လမ်းလျှောက်နေစဉ်မှာ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်က သူတို့ကို သရော်စော်ကားစကားပြောသဖြင့် ဒေါသထွက်ကြောင်းရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှိမ့်ချခံရသူများဖြစ်ပါလျှက် အခုသူတို့ကို စော်ကားတယ်။ တစ်ချို့ဂေးတွေကလည်း ဝသောသူများ၊ မျိုးရိုးဗီဇစိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်နေသူများကို နှိမ့်ချတယ်။ တစ်ချို့အမျိုးသမီးများကလည်း ဂေးများကို နှိမ့်ချသလို တစ်ချို့ဂေးများကလည်း ပြန်လည်နှိမ့်ချကြတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
(စကားစပ်မိလို့ ပြောရပါလျှင် မိန်းကလေးနဲ့ မိန်းမလျာ/ဂေးတွေဟာ အချင်းချင်းနားလည်မှုရှိပြီး ၊ စိတ်ဝင်စားရာလည်းတူ၊အကြိုက်လည်းညီလေ့ရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ စိတ်ပညာလေ့လာစမ်းစစ်လေ့လာချက်တွေအရ မိန်းကလေးတွေက ဂေးသူငယ်ချင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့တွေက အရိုးသားဆုံး၊အစစ်မှန်ဆုံးအကြံဥာဏ်တွေပေးကြတယ်။ ပြီးတော့သူတို့က ကိုယ့်အပေါ်လည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိလို့ သက်တောင့်သက်သာနေနိုင်ပြီး မတူညီမှုတွေက ယှဉ်ပြိုင်စရာလည်း မဖြစ်လို့ပါ။ ကျွန်မလည်း ဂေးသူငယ်ချင်း အလွန့်အလွန်လိုချင်သူဖြစ်ပါတယ်။)
အဲဒီနောက် သူက လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အင်အားနည်းသူကို အချင်ချင်းနှိမ့်ချကြကြောင်း၊ လူနည်းစုအနည်းဖြင့် ကိုယ့်အခွင့်အရေးအတွက် ရပ်တည်တိုက်ခိုက်သင့်ကြောင်း ပြောပြီး စကားနိဂုံးချုပ်ထားပါတယ်။ သူ့သြဝါဒအတိုင်း အိမ်ထောင်မပြုတဲ့လူနည်းစုများကို နှိမ့်ချစော်ကားသူများအား တန်ပြန်သောစာများကို ကျွန်မရေးလိုပေမယ့် အကျယ်တဝင်မပြောတော့ဘဲ ဒီမျှနဲ့ ရပ်တန့်လိုက်ပါပြီ။
သူ့ဂုဏ်ကို နှိမ့် ၊ ကိုယ့်ဂုဏ်နိမ့်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ထိုသရော်ပြောင်လှောင်သရော်သူများကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းအားနည်းသူများဟုသာ သဘောထားကာ လျစ်လျူရှုနိုင်အောင်သာ ကြိုးစားနေပါဦးမယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာမှာ တခြားသူက နှိမ့်ချရုံမျှနှင့် နိမ့်ကျမသွားဘူး မဟုတ်ပါလား။ ဒါပေမယ့် မျက်စိရှေ့အောက်ရောက်လာတဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုများ၊ နှိမ့်ချစော်ကားမှုမှန်သမျှကို မျက်နှာမလွှဲ၊လျစ်လျူမရှုဘဲ လူတစ်ယောက်လုပ်ရမယ့် ကောင်းမှုအကျင့်လို့ ခံယူပြီး လက်သင့်မခံကန့်ကွက်နေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
(ကျွန်မရဲ့စာတွေကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ရူအားပေးသူ၊ ဝေဖန်ကန့်ကွက်သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးများစွာတင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီစာထဲမှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သူအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ။)
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 12/21/2013 09:12:00 AM
your psycho is to stand in front showing that you are different from others.
21/12/13 10:56 AM
I know your psycho is to abuse others and I'm glad to say that I'm notaabuser like you.
but you have no heart to know that I'm justahuman who dislike discrimination.
I think you never understand how to respect other people.
22/12/13 6:21 AM
ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုတွေ နှိမ့်ချစော်ကားမှုတွေ ဖိနှိပ်မှုတွေ အင်အားနည်းတဲ့သူကို အနိုင်ကျင့်မှုတွေ ကို ငယ်စဉ်ထဲက ရွံ့ရှာစက်ဆုပ်သူမို့ အဲလိုလူတွေဟာ လူသားဆန်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ နားမလည်တဲ့သူတွေအဖြစ် ထင်မှတ်မိပါတယ်..
မယ့် ကို အမြဲအားပေးနေမယ့်..
23/12/13 1:02 PM
Interesting article, Ahma Mae! I don't like discrimination either. People are always like that....they like to judge other..... btw it's beenawhile Ahma :) how are you?
4/2/14 10:59 AM
နှစ်ခြိုက်စွာ နောက်တခေါက် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
မ ကို အမြဲအားပေးနေပါတယ်
1/4/14 3:15 PM